Abahlobo abaDala uMartha Kauffman: 'Bendiyinxalenye yoBuhlanga' - Itv
Eyona Itv 'Abahlobo' Co-Creator Uthi 'I Was Part of Systemic Racism'
'Abahlobo' Co-Creator Uthi 'I Was Part of Systemic Racism'
Abahlobo Umdibanisi uMarta Kauffman uthetha ngokuchasene nokusilela kwakhe.Warner Bros. Umabonakude
NgeCawa, Abahlobo Umyili-ntsebenziswano uMarta Kauffman ugxeke izimvo zakhe malunga nokusilela kokwahluka kwi-hit sitcom, eyaqala ukudlala kwi-NBC ukusuka kwi-1994-2004. Ngelixa wayekwiphaneli yoMnyhadala weTelevishini we-ATX, wabuzwa ukuba unqwenela ukuba wazi ntoni xa wayeqala umsebenzi wakhe awuqondayo ngoku.
Ndinqwenela ukuba ndiyazi ngoko into endiyaziyo namhlanje. Ndingathatha izigqibo ezahluke kakhulu, utshilo. U-Kauffman uqhubeke wachaza ukuba ngelixa inkampani yakhe yemveliso u-Okay Goodnight ehlala ekhuthaza abantu beyantlukwano, akenzanga ngokwaneleyo ukuyilungisa ngexesha lakhe Abahlobo . Kwaye yilento andinqweneli ukuba ndiyazi xa ndiqala ukubonisa kodwa ndinqwenela ukuba ndiyazi yonke indlela kunyaka ophelileyo. Abalandeli kumajelo asekuhlaleni babeneempendulo ezixubeneyo kumagqabantshintshi akhe, becaphula imiboniso emithandathu emhlophe ekhokelayo njengomzekelo ocacileyo wokuphoswa okungafaniyo.
UKauffman emva koko wathetha naye Isisongelo kwangoko kule veki ukwandisa izimvo zakhe kunye nokujongana ngokuthe ngqo nokusilela kwakhe ekuxhobiseni iindidi zamazwi kumabonakude oqhelekileyo.
BONA KWAKHO: Umntwana wakho uya kuthanda 'uArtemis Fowl' ke akuyomfuneko
Jonga, ndi-kwaye ndiza kuzama ukuba ndingavakalelwa yile nto-umbuzo awubuzileyo yile unqwenela ukuba uyazi ngoku njenge-showrunner? Yintoni onqwenela ukuba uyazi ngelo xesha ndiyayazi ngoku. Kwaye into endiyithethayo kukuba, yinto endiyifundileyo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo-kwaye oku akupheleli nje t Abahlobo , oku malunga nomsebenzi wam - ukuba andenzanga ngokwaneleyo ukukhuthaza amazwi amnyama, ukuzisa abasebenzi abamnyama, ukuzisa ababhali abamnyama. Khange ndenze ngokwaneleyo, waqala uKauffman.
Uqhubeke: bendiyinxalenye yenkqubo yobuhlanga. Ndithatha uxanduva olupheleleyo malunga naloo nto, ukuba ndandingazi nto ukuba andizange ndibone ukuziphatha kwam. Andizange ndizicinge njengobuhlanga, uyazi. Ndacinga ukuba ndingulo mntu wamkela wonke umntu kwaye akholelwa kwizinto zobuntu kunye nobuntu. Ndivele, ndiyiphose, ndiyiphosile. Kwaye ngoku ndijonga ngasemva kwaye ndicinga ukuba andinakuphila ngoluhlobo kwakhona, andinakuyenza loo nto kwakhona. Kuya kufuneka ndifumane indlela yokutshintsha indlela endifikelela ngayo ebantwini, indlela endifumana ngayo abasebenzi, indlela endifumana ngayo ababhali, indlela endifumana ngayo amazwi amatsha ngaphandle kokufaka nantoni na. Andicingi ukuba ndim oza kubalisa amabali amnyama, kodwa ndim oza kungenisa ababhali abamnyama ukuba babhale kwimiboniso yam. Ndinguye okhuthaza ukufumana abasebenzi abamnyama. Kwaye ndiyaxolisa ngokungazi kwam kwaye ndiyathemba ukuba ndifunde ngokwenene kuyo kwaye ndiza kuziphatha ngendlela eyahlukileyo.
Isinyathelo sokuqala sikaKauffman ekulungiseni iimpazamo zangaphambili kukuyalela u-Okay Goodnight ukuba alandele ngomsindo ababhali abohlukeneyo.
Senza zonke iintlobo zokufikelela ebantwini ukukhangela ababhali kunye nokukhangela abantu abanokusebenza kwinkampani yethu ukuqala kwinqanaba eliphantsi kwaye bakhulele kwimisebenzi emikhulu, esiyenzayo nakowonke umntu osebenza kwinkampani yethu, yena utshilo. Wonke umntu uqala endaweni enye kwaye unyuke. Umfazi owayengumncedisi wam ngoku uyintloko yophuhliso. Ke ndiyathemba ukuba nangona kunjalo siyifumana indlela yokwenza oku, ngaphandle kokufikelela- kwaye nabantu bayafikelela nakum, kwaye ndiyayixabisa. Abantu bazama ukuza kum besithi, 'Ndingumntu omnyama we-transgender ongenalo ithuba lokuba ndive ilizwi lam, ungasifunda iscript sam.' Kwaye siza kuyenza loo nto kwaye siza kuvuleleka kuyo yonke into esiza nayo.
Nangona kunjalo, inyathelo elinye kwicala elilungileyo aliyi kulungisa ngokufanelekileyo ukusilela okuxhaphakileyo. Ngokwenqaku lika-2017 kwi UMgcini , kuphela yi-4.8% yababhali beTV abamnyama. Ngelixa ukwanda kweenkonzo zokusasaza kukhokelele kwimfuno eyandayo yomxholo, abantu abanemibala basahoywa kwindima eziphambili ngenxa yokunqongophala komelo okanye amava abonwa. Ngo-2018 INew York Times Ibali lifumanise ukuba ngelixa iHollywood ibikhangela ababhali abahlukeneyo, ishishini lokonwaba lisilele ukulungisa kakuhle nokuxhasa amazwi aphuma kwiindawo ezahlukeneyo ukuya kuthi ga ngoku bazinzile kwizitudiyo eziphambili.
UChristina Hendricks ku 'Hap noLeonard,' uFemme Fatales, kunye noBomi emva 'kweMad Mad'
Ungasibhala njani isicelo soQhagamshelo esigqibeleleyo
INetflix ebekwa ityala kwiiFelony Charges ngaphezulu kwe'Cuties '
'IQela lokuzibulala' kunye 'neGOTG3' ziya kuphuma ngexesha, UJames Gunn uthi
inkwenkwezi entsha yokuhamba bhanyabhanya kwisizukulwana esilandelayo
Igunya lokwenyani lehlabathi elibi
ikhefu (uthotho lwetv) iziqendu
ezona pilisi zokutya zibalaseleyo kwabasetyhini abangaphezulu kwama-40
Iindawo ezilishumi eziphezulu zithenga umsesane wokuzibandakanya